Mpaminanin'i Israely - Wikipedia
Ny mpaminanin' i Israely dia olona manana fahafahana hamantatra ny zava-kitranga amin' ny hoavy amin' ny alalan' ny tsindrimandry avy amin' Andriamanitra, ka manambara izany mialoha amin' ny alalan' ny teniny mivantana na ny soratra ataony sady mitenenana amin' ny anaran' Andriamanitra hampita ny hafany. Hetsehin' Andriamanitra sady miasa amin' ny anaran' Andriamanitra ny mpaminany ka mety hifanohitra amin' ny hevitry ny mpiara-belona aminy izy noho izany. Ao amin 'ny fivavahana jiosy ny mpaminany dia manambara ny zava-doza mety hitranga tokoa raha tsy miova fitondran-tena ny vahoaka, ary ireo mpaminany ireo dia mampiseho famantarana sy fahagagana mba hinoana izay voalazany. I Abrahama no mpaminany voalohany voalaza ao amin' ny Torah. Atao hoe נביאים / nevi'im na nebhi'im ny mpaminany amin' ny teny hebreo.
Ny mpaminany Malakia (sary nataon' i James Tissot, taona 1896–1902)
1 Ny mpaminany ao amin' ny Tanakh
1.1 Ny mpaminany "mpanoratra"
1.2 Ny mpaminany hafa
2 Ny mpaminany araka ny Talmoda
2.1 Ireo mpaminany lahy 48
2.2 Ireo mpaminany vavy fito
2.3 Mpaminany hafa
Ny mpaminany ao amin' ny TanakhHanova
Ny mpaminany "mpanoratra"Hanova
Anarana anondroana ny fizaràna faharoa ao amin' ny Baiboly jiosy amin'ny teny hebreo (na Tanakh) ny hoe Nebhi'im na Nevi'im. Ny boky nosoratan' ny mpaminany lazaina araka ny lovantsofina jiosy fa nanoratra no avondrona amin' io anarana hoe Nevi'im io. Ireo mpaminany nanoratra ireo dia sokajina ho mpaminany taloha (hebreo: נביאים ראשונים / Nevi'im Rishonim) sy mpapinany taoriana (hebreo: נביאים אחרונים / Nevi'im Aharonim).
I Mosesy na Môizy, izay lazaina fa lehibe indrindra, dia ataon' ny lovantsofina jiosy fa nanoratra ny Torah (ny boky dimy voalohany ao amin' ny Baiboly), nefa tsy isaina ao amin' io atao hoe Nevi'im io. Matetika ireo mpaminany ireo dia tsy mankasitraka ny fahefana ara-pôlitika fa mitsikera na manohitra azy.
Ireto avy ireo mpaminany ireo: Jôsoa, i Samoela, i Isaia, i Jeremia, i Ezekiela, ireo mpaminany madinika roa ambin' ny folo (i Hôsea, i Jôela, Amôsa, Ôbadia, i Jônà, i Mikà, i Nahoma, i Habakoka, i Zefania, i Hagay, i Zakaria, i Malakỳ). Marihina fa na dia lazaina araka ny lovantsofina fa nanoratra bokim-paminaniana i Daniela dia tsy voasokajin' ny Jiosy ho isan' ny "Mpaminany".
Ny mpaminany hafaHanova
Tsy ireo fotsiny noho izany no mpaminanin' i Israely fa maro. Ireto avy ireo mpaminany hafa ireo: i Abrahama, i Aarona, i Mosesy, i Eldada, i Medada, i Gada, i Natàna, i Ahia avy any Silo, i Jeho, i Elia, i Elisa, Jeedo, i Semaia, i Ido, i Obeda, i Odeda, i Asafa ary i Oria. Ireto ny mpaminany vavy: Miriama (anabavin' i Mosesy sy Aarona), i Debora, i Holda ary i Noadia.
Ny mpaminany araka ny TalmodaHanova
Araka an' i Rashi dia nisy mpaminany lahy miisa 48 sy mpaminany vavy miisa 7 tao amin' ny jodaisma. I Malakia no heverina ao amin' ny jodaisma ho mpainany farany. Araka ny lovantsofina jiosy, ny vanimpotoan' ny mpaminany, iay atao hoe Nevuah, dia nifarana tamin' i Hagay sy i Zakaria ary i Malakia, izay fotoana nialan' ny fanatrehan' Andriamanitra (hebreo: שכינה‎ / sekina) avy tao amin' ny vahoakan' i Israely. Tsy ireo 55 ireo ihany no mpaminany tao Israely, araka ny Talmoda, fa mihoatra ka any amin'ny 1 200 000 any ny isan' izy ireo, indroan' ny isan' ny lehilahy nivoaka avy tany Ejipta (izay niisa 600 000).
Ireo mpaminany lahy 48Hanova
Jakoba (na Israely)
Mika zanak' i Imla
Jeho zanak' i Hanany
Azaria zanak' i ÔdedA
Eliezera zanak' i Dodavaho
Jôna zanak' i Amitay
Ireo mpaminany vavy fitoHanova
Tsy ny lehilahy ihany no mpaminany ao amin' ny jodaisma fa ny vehivavy koa.
Ireo 55 ireo no voatakitra satria nanambara faminaniana manana ny lanjany mandrakizay ho an' ny taranaka hoavy ny faminaniany fa tsy ho an' ny vaninandro niainany ihany na hanehoany ny hasafononoky ny fahafinaretana azony amin' ny fihaonana amin' Andriamanitra. Izao ohatra ny voasoratra ao amin' ny Boky voalohan' i Samoela:
"10 Ary rehefa tonga tany Gibea, izy indro, ny mpaminany maro irai-dia nifanena taminy; dia nilatsaka tamin' i Saoly ny Fanahin' Andriamanitra, ka naminany teo aminy izy. 11 Ary nony hitan' izay rehetra nahalala azy hatramin' ny taloha fa, indro, maminany eo amin' ny mpaminany izy, dia nifampilaza ny olona ka nanao hoe: Inona izao tonga amin' ny zanak' i Kisy izao? Saoly koa va mba isan' ny mpaminany? 12 Ary ny anankiray teo namaly hoe: Fa iza moa no rain' ireny? Ary izany no nisehoan' ny fitenenana hoe: Saoly koa va mba isan' ny mpaminany? 13 Ary rehefa nitsahatra naminany Saoly, dia nankeo amin' ny fitoerana avo." (1Sam. 10.10-13, Ny Baiboly).
"10 Nony tonga tany Gabaà izy, indreto ny mpaminany maro, andiany iray, nifanena taminy, dia nilatsaka taminy ny Fanahin' Andriamanitra ka naminany teo afovoan' ireo izy. 11 Nony hitan' izay rehetra nahalala azy taloha fa niara-naminany tamin' ireo mpaminany koa izy, dia nifampilaza ireo olon-drehetra ireo hoe: Fa naninona ity zanak' i Kisy? Mba isan' ny mpaminany koa va Saola? 12 Niteny ny iray teo amin' ny vahoaka ka nanao hoe: Ary iza moa no rain' izy ireo? Izany no nahatonga ilay fitenenana hoe: Mba isan' ny mpaminany koa va Saola? 13 Nony efa nitsahatra tsy naminany izy, dia nankeo amin' ny fitoerana avo." (1Sam. 10.10-13, Ny Baiboly Masina).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Mpaminanin%27i_Israely&oldid=1010514"
Dernière modification le 2 Aprily 2021, à 08:15
Voaova farany tamin'ny 2 Aprily 2021 amin'ny 08:15 ity pejy ity.